UJuni ubenzelwe iNhlonhlo Yase-Iberia, ukugxila komhlaba wonke emazingeni okushisa aphezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngenyanga edlule ka UJuni wayefudumele kunabo bonke eNhlonhlweni Yase-Iberia ngoba banamarekhodi e-Aemet. Inhlangano yezimo zezulu yezwe. Inyanga yesibili efudumele yokushisa okujwayelekile emhlabeni, ngemuva kukaJuni odlule 2016. Futhi wukuthi iplanethi ibhalise ngokulandelana amarekhodi okushisa nyangazonke, phakathi kuka-Okthoba 2015 noSepthemba 2016.
Izinga lokushisa eliphakathi nendawo ebhaliswe eSpain lalingu-24,1ºC. Uma ucabangela isilinganiso sale nyanga, futhi uthatha isikhathi esiphakathi kuka-1981 no-2010, izinga lokushisa belilokhu likhona 3ºC ngaphezulu. Irekhodi lokushisa langaphambilini lalimi ngo-2003 ngo-24,0ºC, lidlulwa ngu-0,1ºC kowokugcina.
1 Imfudumalo yomhlaba ekhethekile
2 Amarekhodi okushisa komhlaba wonke
Imfudumalo yomhlaba ekhethekile
ICopernicus Climate Change Service ye-European Center for Medium-term Meteorological Predictions, ikhombise ukuthi uJuni kulo nyaka kwandiswe isikhathi "Sokufudumala Komhlaba Okungajwayelekile". Iqale maphakathi no-2015, futhi yabhalisa ukwanda ngo-0,38ºC ngenyanga kaJuni uma kuqhathaniswa nesilinganiso esiphakathi kuka-1981 no-2010. Babephansi ngo-0,06ºC kuphela uma kuqhathaniswa nenyanga efanayo yanyakenye ngo-2016.
Ezinye izindawo zeplanethi lapho kubhalwe khona amazinga okushisa aphezulu angajwayelekile. IMorocco, iSiberia, i-Antarctica, izingxenye ze-Middle East kanye neningizimu-ntshonalanga ye-United States phakathi kwabanye.
Amarekhodi okushisa komhlaba wonke
Amarekhodi wonyaka ahlinzekwa yi-Wikipedia
Njengoba sishilo muva nje ku-Network Meteorology, I-Ahwad, e-Iran, ibhalise u-53,7ºC owesabekayo lokushisa ngamagagasi okushisa aholele ku-deh echo, ku ngaphezu kuka-50ºC ezindaweni ezahlukahlukene eMpumalanga. Phakathi kwazo i-Iraq ne-Kuwait. Ku- I-United States ifinyelele ku-47,2ºC eLas Vegas, 51,7ºC ezinaliti. Isikhumulo sezindiza ePhoenix kudingeke ukuthi sikhansele izindiza eziningi, ngemuva kokubhalisa ama-43ºC phakathi komhla ziyi-17 kuya kwangama-27 ngenyanga edlule.
Igagasi lokushisa elaphinde lahlasela iNhlonhlo Yase-Iberia, futhi elalihamba ngaseningizimu-mpumalanga yeYurophu, lenza ukuthi kuqoshwe okungaphezu kuka-40ºC emazweni amaningi.
Kubukeka sengathi amarekhodi ngeke anqamuke, nokuthi siyaqhubeka esikhathini esifudumele okwamanje, esingasidedeli. Sizobona ukuthi leli hlobo lonke liqhubeka kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » UJuni ubenzelwe iNhlonhlo Yase-Iberia, okugxilwe kukho konke emazingeni okushisa aphezulu